Iselula | Amakhasino e-inthanethi Amakhasino e-inthanethi
(261 amavoti, isilinganiso: 4.97 out of 5)
Iyalayisha ... Uma ucabangela ukusetshenziswa kabanzi kwezingcingo eziphathwayo phakathi kwabagembuli abaku-inthanethi, akumangazi ukuthi ukugembula kwamakhasino eselula sekuqala ukuthandwa kakhulu kulezi zinsuku. Ngenkathi abadlali be-inthanethi bengenawo njalo amakhompyutha abo, singasho ngokuphepha ukuthi iningi labo liphatha izinto eziphathwayo zazo zonke izinhlobo nomaphi lapho liya khona, futhi akumangalisi ukuthi bajabule ukuthola ithuba lokudlala imidlalo abayithandayo ye-casino kumaselula abo noma amaphilisi.
Ukuqaphela ikhono elingavumelekile lokugembula eselula, amakamelo amakhonsathi aphezulu avela ku-intanethi akhiphe izinhlelo zokusebenza ezikhethekile zes Casino ezingatholakala kuwo wonke amadivaysi aphethwe ngaphandle. Njengoba inamba ekhulayo yabathanda ukugembula ishintsha kancane kancane kumakhasino ahamba phambili e-intanethi, sinqume ukwakha isigaba esikhethekile esizinikezelwe kumakhasino aphezulu omakhalekhukhwini.
Uhlu Top 10 Ucingo Casino Amasayithi
Android Amakhasino Hambayo
I-Google Inc. ithole i-Android ku-2005. Ukungabaza kwakucabanga ukuthi akusilo ukuhamba kahle kwenkampani yezinkulungwane zama dollar, kodwa bekungalungile ngoba i-Android ethuthukile ngokushesha yathatha imboni yeselula ngesiphepho. Ikakhulukazi emkhakheni wezokugembula kwekhasino, i-Android iye yathandwa kakhulu kangangokuba amakhasino amaningi e-inthanethi akha ama-casino ahambisana neselula e-Android. Isistimu yokusebenza yeselula, amandla we-Android amaningi amafoni smart kanye amaphilisi futhi ngenxa yomthombo walo ovulekile umthombo inikeza indawo eyanele yokuthuthukisa kanye nemisha. Imidlalo ye-casino yeselula ivame ukugijima kahle ku-Android nabadlali bathola isipiliyoni esikhulu sokudlala ekuhambeni.
I-Blackberry ingenye yamafoni okuqala ahlakaniphile enza indlela yokuya emakethe yefoni ephathekayo futhi isadumile phakathi kwabantu ngisho noma amanye amamodeli efoni smart asetshenzisiwe. Le divayisi yasungulwa ku-1999 inkampani yaseCanada esekelwe. I-Blackberry iyona idivayisi yeselula ethandwa kakhulu yesihlanu ngakho-ke akumangalisi ukuthi kungani abaningi bezokugembula bekhasino beyisebenzisa ukuze bafinyelele emidlalweni yabo yezintandokazi zeselula uma bekho kude nama-PC abo bekhompuyutha. Idivaysi inikeza umdlalo weselula wekhasino olubushelelezi futhi abadlali bangadlala imidlalo ngaphandle kwesikhathi nemingcele yendawo. Konke okumele bakwenze ukuthola ukuthola i-casino ephathekayo ephephile yaseBlackberry bese ubhalisa i-akhawunti.
I-iPad esuka ku-Apple ithathe ukugembula kwekhasino yeselula kuya ezingeni elisha lokuthakazelisa nokuzijabulisa. Njengoba iphathekayo futhi ilula njenge-iPhone, kodwa ngokusebenza okunamandla kwe-PC yedeskithophu, i-iPad inikeza isipiliyoni semidlalo esheshayo esivamile ekuhambeni ukuthi yizona eziphikisanayo ezisezindaweni ze-casino eziku-intanethi. Cishe wonke amakhasino ephathekayo ahambisana ne-iPad, ngakho-ke, abadlali banokukhetha okuhle futhi bangacabangela izinketho zabo ngaphambi kokuba babhalise i-akhawunti bese benza idiphozi. Nge-iPad ngeke udumale futhi uzoba nokudlala kwekhwalithi noma ngabe ukuphi futhi noma kunini uma uzizwa uthanda ukudlala.
iPhone Ucingo Amakhasino
I-Apple Inc. yathuthukisa ukugembula kweselula ngokwethulwa kwe-iPhone. Idivayisi ihle kakhulu ngokudlala imidlalo yekhasino ephathekayo ekuhambeni futhi ngenxa yekhwalithi yayo, ukudlala imidlalo kumangalisa nje. Yambulwe cishe iminyaka emine eyedlule, i-iPhone inikeze abantu ithuba lokuvela kuzo zonke izingxenye zomhlaba futhi ifinyelele empumelelweni emangalisayo emhlabeni wonke. I-iPhone iyinhlangano ephathekayo ye-multimedia ephathekayo esebenza kahle njengekhompyutha kasayizi wephakeji esebenza kuhlelo lwe-iOS olusebenzayo. Idivayisi iyahambisana namakhasino amaningi eselula, ngakho-ke uyakwazi ukukhetha owuthandayo bese udlala imidlalo oyithandayo noma ngabe ukuphi.
Omunye umkhiqizo omuhle kakhulu we-Apple, i-iPod iyindlela enhle yokufisa ungadlala imidlalo ekhangayo yekhasino ekuhambeni. Imidlalo yokudlala yamakhasino ku-iPod isheshe idume njengokubeka ukubheja kwi-PC yasekhaya. Abalandeli beKhasino bangadlala imidlalo enjenge-slots, i-roulette, i-blackjack kanye ne-poker yevidiyo ngqo kwi-iPod. Bayakwazi ukubona ukuthi inhlanhla kanjani lapho bedlala imidlalo yangempela yemali futhi banethemba lokuwina okukhulu noma bangabheka imidlalo ngemodi yamahhala. Akukhathalekile ukuthi ngabe badlalela ubumnandi noma banethemba lokushaya i-jackpot eshintsha impilo, abadlali be-iPod bangakujabulela ngempela ukujabula ngokugembula noma kuphi, nganoma yisiphi isikhathi.
I-Windows Mobile yasungulwa yi-Microsoft ku-2003 futhi yaqala njengomakhalekhukhwini ovamile. Kodwa-ke, idivayisi ibe ngaphansi kokuthuthukiswa okuqhubekayo futhi inguqulo entsha, Windows Phone 7, itholakale kubasebenzisi abavela kuzo zonke izingxenye zomhlaba ekupheleni kwe-2011. I-Windows Mobile ayiyona ethandwa njenge-iPhone noma i-Android, kodwa inikeza ukusebenza okuhle futhi abalandeli be-casino bangadlala imidlalo ehlukahlukene yesimanje casino kuyo. Abadlali bangathola kalula amakhasino asebenzayo e-Windows Mobile bese uqala ukudlala imidlalo ngesikhathi esithile. Ngenxa yokuthi kulula, abagembula bezelula bangadlala imidlalo noma nini lapho befuna, kungakhathaliseki ukuthi bakuphi.
1 Uhlu Top 10 Ucingo Casino Amasayithi
2 Android Amakhasino Hambayo
3 Blackberry Amakhasino Hambayo
4 iPad Amakhasino
5 iPhone Ucingo Amakhasino
6 iPod Amakhasino
7 Windows Mobile Amakhasino